बजेट पारित गरेपछि संसद् के हुन्छ ? |
गृह पृष्‍ठ अर्थ-बजार बजेट पारित गरेपछि संसद् के हुन्छ ?
प्रकाशित मिति : २०७८ आश्विन ७ , बिहीबार ०८:१०
संसदीय मामिलाका जानकारहरू भने काम नभएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर नै सरकार अघि बढ्ने गरेको बताउँछन्। बीचमा अध्यादेश ल्याउनुपर्यो भने पनि सहज हुने हुँदा अन्त्य गर्ने बाटो नै सरकारले रोज्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
पछील्लो पोस्ट ७९ लाखले लगाए पूर्ण खोप
अगिल्लो पोस्ट दशैंको अग्रिम टिकट खुलाउने तयारी
राष्ट्र बैंकले एक रुपैयाँका नयाँ सिक्का बजारमा ल्याउँदै